Fibre Laser Cutting Machine Manufacturers |Shina Fibre Laser Cutting Machine mpamatsy sy orinasa
KF3015T IPG Raycus High Speed ​​CNC Sheet Metal Pipe Tube Fibre Laser Cutting Machine
Laharana modely: KF3015T
KF3015T IPG hafainganam-pandeha avo CNC takelaka vy fantsona fantsona tamin'ny laser fanapahana milina no tena ampiasaina amin'ny sodina vy sy ny taratasy fanapahana.1KW ~ 8KW dia misy, garantie 3 taona.
Laharana modely: KP6020
KP6020 hery avo CNC fibre tamin'ny laser fanapahana milina no tena ampiasaina ho an'ny takelaka vy matevina.1000 watt, 1500 watt, 2000 watt, 3000 watt, 4000 watt, 6000 watt, 8000 watt, 12KW, 15KW, 20KW dia tsy voatery.Fitaovana tamin'ny laser hery avo, dia afaka manao hery avo sy avo mahomby fanapahana, mety ho antonony sy mavesatra lovia vy.High rigidity tsindry fanariana aluminium firaka crossbeam, dia afaka mahatsapa ny hafainganam-pandeha avo.Fanaraha-maso HD, 360 ° tsy misy zoro jamba, ny fanaraha-maso amin'ny fotoana tena izy dia afaka miantoka ny fiarovana.
KF3015P feno rakotra latabatra tokana fibre laser fanapahana milina ho an'ny takelaka metaly
Laharana modely: KF3015P
KF3015P feno fibre tamin'ny laser fanapahana milina dia kely habe, tokana latabatra amin'ny 3000 * 1500mm faritra fanapahana, tena mety amin'ny atrikasa kely.1000w, 1500w, 2000w, 3000w, 4000w ary 6000w dia misy.Garantie 3 taona.
1000W 1500W 2000W Kely Sheet Metal Fibre Laser Cutter
Laharana modely: KP1390
KP1390 kely fibre vy tamin'ny laser cutter no tena ampiasaina ho an'ny habe vy taratasy kely.1000W, 1500W, 2000W, 3000W, 4000W dia tsy voatery.Ny firafitry ny habaka dia ampiasaina tsara, ny faritra fanapahana dia 1300 * 900mm, 600 * 600mm na hafa, mamonjy toerana sy loharanon-karena, ny fitaovana dia azo afindrafindra.Ny fahamarinan-toerana matanjaka, avo lenta, 20 taona tsy misy deformation.
Automatic Metal Tube Sy Sodina Fibre Laser Cutting Machine
Laharana modely: KT6
KT6 metaly fantsona tamin'ny laser fanapahana milina no tena ampiasaina ho an'ny vy fantsona fanapahana.Ny familiana servo feno, ny auto-centering ary ny fametahana herinaratra dia afaka mamonjy tailings.Ny faritry ny fanapahana dia mampiasa sarony fiarovana voahidy, misy fitaovana fanangonana setroka.Bed-roller dia afaka manohana tsara ny karazana savaivony fantsona amin'ny isan-karazany mba hiantohana ny fanapahana marina.
Carbon Stainless Steel Fibre Laser Cutter miaraka amin'ny latabatra mifanakalo
Laharana modely: KE3015
KF3015 mifanakalo latabatra fibre tamin'ny laser fanapahana milina dia sehatra roa, mifamadika haingana, ambony fanapahana fahombiazana.
Ny tapa-kazo enina arris bilateral dia afaka mahatsapa ny toeran'ny ankapobeny, milamina kokoa.Ny fanampiana lavitra WIFI dia afaka mahatsapa ny famahana olana ara-potoana.
Fibre Laser Cutting Machine feno ho an'ny Stainless Steel
Laharana modely: KP3015
KP3015 feno fibre mihidy tamin'ny laser fanapahana milina mampiasa tamin'ny laser fitaratra rakotra fiarovan-tena sy ny antonony vovoka rafitra fitsaboana afaka mampihena ny fahavoazana ho an'ny vatan'olombelona.Ny tapa-kazo enina arris bilateral dia afaka mahatsapa ny toeran'ny ankapobeny, milamina kokoa.
Sehatra roa, fifandimbiasana haingana, fahombiazana ambony kokoa.
Metal Sheet And Tube Fiber Laser Cutting Machine Avy any Shina
KF3015T metaly sy Tube fibre tamin'ny laser fanapahana milina no tena ampiasaina amin'ny vy taratasy sy ny fantsona fanapahana.1000W, 1500W, 2000W, 3000W, 4000W ary 6000W dia mety ho safidy.Miaraka amin'ny vidin'ny orinasa sy ny garantie 3 taona.
Laharana modely: KF3015
KF3015 misokatra karazana tamin'ny laser fanapahana milina no tena ampiasaina ho an'ny vy taratasy fanapahana.1000W, 1500W, 2000W, 3000W, 4000W ary 6000W dia misy.
1kw 1.5kw 2kw 3kw 4kw Single Table Fiber Laser Cutting Machine dia ampiasaina indrindra amin'ny vy karbaona, vy malefaka, vy tsy misy pentina, aliminioma ary tapa-taratasy metaly hafa.1000W, 1500W, 2000W, 3000W, 4000W ary 6000W dia misy.
6 Axis 3D fibre laser fanapahana robot
RF-H 6 axis 3D fibre laser fanapahana robot no tena ampiasaina amin'ny metaly tsy ara-dalàna, 1000W ~ 4000W dia misy.
KF6015 Auto Focus Fibre Laser Cutter
KF6015 fibre tamin'ny laser cutter dia ampiasaina indrindra amin'ny metalyvilia manapaka .1KW , 1.5KW , 2KW , 3KW , 4Kw sy 6KW hery tamin'ny laser dia misy, Ny faritra fanapahana dia namboarina ihany koa .